Dhawunirodha Spotify Premium APK Yemahara - VidaBytes | LifeBytes
Kune avo vanoda kuve nekwaniso kune ese Spotify rwiyo zvinyorwa asi zvemahara, Tichataura nezvedzimwe nzira dzekurodha pasi Spotify Premium APK yemahara. Iwe hauzove nematambudziko makuru kana mutsauko, nekuti unenge uine ese mashandiro ayo Spotify Premium inopa.
Imwe yemhinduro dzekutanga dzakapihwa kurodha pasi Spotify Beta, iyi APK inopa chengetedzo kunyangwe iri yemahara zvachose. Iwe haufanire kukanzura chero huwandu hwekuburitswa kwenziyo, kunze kwekunge iwe uchida kudhawunirodha sezvo isina iro remahara basa.
Nokurodha pasi Spotify Apk iwe unokwanisa kuwana kune akanyorwa enziyo dzakanyanya kuridzwa uye dzakagovaniswa, pamwe nenziyo dzazvino, uye kunyange kushandisa redhiyo pasina kubhadhara mutengo wekushandisa. Heano maitiro aunogona kuzviita:
1 Nzira yekuwana Spotify Premium yemahara?
2 Dhawunirodha Spotify Premium yemahara nefoni ID shanduko
3 Dhawunirodha Spotify Premium yeMahara uchishandisa Mahara Kuyedza Kuongorora
Nzira yekuwana Spotify Premium yemahara?
Spotify Beta ndeye yemahara vhezheni yakafanana chaizvo neSpotify Premium, uye kuti utore pasi unofanira kuisa ma link aya kuti nekudzvanya pawo ugone kuisa Spotify.
Iyi APK Spotify inokutendera iwe kuve neyako raibhurari, mauri maunogona kuronga nziyo uye zvemukati, zvinoenderana nekuti ndeapi aunofarira, uye iwe unogona zvakare kugadzira yako wega zvinyorwa.
Iyo iri zvakare vhezheni yeSpotify Premium yemahara apk yakagadziridzwa zvachose saka zvichaita sekunge iwe wakadhirowa Spotify Premium 2019. Unofanira zvakare kuyeuka kuti aya maAPK haabatanidze iyo Spotify download kodhi kuitira kuti iwe ugone kutamba nziyo chete kushandisa kamwe iko kunyorera.
Dhawunirodha Spotify Premium yemahara nefoni ID shanduko
Kana sarudzo yapfuura isiri yako kana usingakwanise kuikanda, unogona kusarudza kushandura ID yekufambisa kuti utore Spotify Premium yemahara. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kukopa iyo Spotify app kuti ugadzire account senge uchange uchizoshandisa iyo yakabhadharwa sevhisi, mushure meizvozvo inokupa iwe, nekunyoresa iyo account, kunakirwa kwenguva shoma yekushandisa mahara, kana ivo ratidza, nguva yekuyedza yekushandisa.
Nekudaro, iwe unofanirwa kufunga kuti kubva panguva iyoyo iko kunyorera kunochengeta yako nharembozha mundangariro yayo, saka unogadzira account nyowani uye iine ID imwechete iwe haugone kusarudza iyo yemahara kuyedzwa kweSpotify Premium. Ichi ndicho chikonzero zvinokurudzirwa kuti pese panopera sevhisi yako yemahara, unoita shanduko yeiyo ID yeApple.
Kune izvi iwe unofanirwa kuve mudzi mushandisi weiyo Android foni uye wozotora kurodha application inonzi Chishandiso ID Changer, iwe unogona kuiwana zviri nyore paGoogle Play. Mushure mekurodha pasi Anwendung, iwe unofanirwa kupinda uye tinya bhatani rinoratidza izwi rekuti "Random" uye nenzira iyi kunyorera kuchakusarudzira ID nyowani.
Maitiro anotevera ekupedzisa ndiyo yakajairwa restart yefoni yako, vhura Spotify Premium zvakare uye unyore mushandisi mutsva, iwe uchaona kuti ID yako haizoyeukwa uye inokupa iwe yemahara kuyedzwa zvakare. Aya maitiro anonetesa zvishoma asi ichiri kushanda.
Dhawunirodha Spotify Premium yeMahara uchishandisa Mahara Kuyedza Kuongorora
Imwe sarudzo iri patafura yekurodha Spotify yemahara iri kuburikidza neyeMahara Yeyedzo Yekutarisa chishandiso. Izvi zvinobva kune Usabhadhara kunyorera uye zvinokutendera iwe kuti ugadzire alias nekadhi rechikwereti zvirinani uye mahara.
Paunenge iwe wawana ma alias ako uye yako chaiyo kadhi kuburikidza neapp iyi, iwe unozokwanisa kuisa iyo data muSpotify Premium uye uchave uine Spotify yemahara kwenguva yakareba. Iwe haufanire kunetseka nezvekupara mhosva, nekuti Mahara Kuedzwa Kutarisisa kunotsigirwa nemabhangi epasi rese.
Iyo chete yekumashure kune iyi sarudzo ndeyekuti inongowanikwa kwechinguva chete kune iOS. Kana zvichidikanwa kune vashandisi veApple, unofanirwa kuita imwe nzira kuburikidza ne "kutanga kuwana" asi uchipinda yepamutemo webhusaiti yeUsabhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Applications » Dhawunirodha Spotify Premium APK yemahara
Mhando dzemavhairasi emakomputa anokuvadza kuhurongwa
Chii chinonzi IMEI uye maitiro ekuitarisa zviri nyore?